China CR Foam Tape factory sy mpanamboatra | Egret
CR (Chloroprene Rubber) dia elastomer miaraka amin'ny chlorobutadiene ho akora fototra ho an'ny α-polymerization, mety levona amin'ny toluene, xylene, dichloroethane, erylien vanadium telo. Izy io dia mety levona kely amin'ny acetone, methyl ethyl ketone, etil acetate, cyclohexane，raha tsy voavaha amin'ny n-hexane, naphtha misy solvent, fa mety levona ao anaty solvent mifangaro arakaraka ny haben'ny tsara, mahantra ary tsy misy fotony, na mahantra sy tsy misy fotony.
CR foams dia mahazaka fanoherana tsara ny menaka，mahazaka akanjo avo，hafanana mahatohitra sy manatanjaka ny hery adhesive. Ho fanampin'izany, izy io koa dia misy fanoherana rano tsara, fahateren'ny rivotra ary fananana mamatotra tsara, tsara kokoa ihany koa ny faharetan'ny lelafo. Ampiasaina betsaka amin'ny fanaovana vokatra vita amin'ny solika isan-karazany, karazana gasket mahatohitra solika, gasket, tanany, fonosana malefaka fantson-tànana, fanontana sy fandokoana cots, kojakoja vita amin'ny tariby, sns., ao anaty vata fampangatsiahana no ampiasaina amin'ny fanamboarana andry mihodina. Ny vokatra rehetra dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny RoHS.
● Fonosana buffer fonosana
● famehezana iraisana fanamboarana sivily
● Fifamoivoizana / fifamoivoizana fiara tsy mahazaka sy famehezana
● mahatohitra hafanana / frizidera / frizera
● Fanamboarana vatan-tsolika refigerator
Ankehitriny, manome ny mpanjifantsika matihanina amin'ny vokatra lehibe izahay Ary ny orinasanay dia tsy ny "mividy" sy "mivarotra" ihany, fa mifantoka amin'ny bebe kokoa ihany koa. Izahay dia kendrena ho mpamatsy sy mpanohana maharitra anao any Sina. Ankehitriny, manantena izahay fa hiaraka aminao.
Teo aloha: Kitapo fanerena BLPS-YKHL01 Manaraka: Tape vita amin'ny sola PE
ADHESIVE FOAM SIDED SADED